Publications - Local Hazardous Waste Management Program in King County
Home >> Publication List
--- select --- Title Author Abstract Language Contain Begin with End with Exactly Search Clear
Small Business Hazardous Waste Disposal (Somali)
Businesses in King County meeting necessary criteria may dispose of hazardous wastes at the household hazardous waste sites for no fee. This flyer shows some of the materials that are accepted for dis ...
Ku nadiifinta Si taxadar ah
Sawiradan waxaa loo isticmaalaa in lagu caawiyo Aqoon isweedaarsiga ku nadiifinteena ee Taxadarka. Kulanka aqoon isweedaarsiga wuxuu caawiyaa ilaaliyaasha iyo nadiifiyayaasha guriga sameeyaan shaqadooda ee qaab ammaan ah. Waxay bartaan sida loogu doorto alaabaha qaab ammaan ah iyo lagu xirto qalab badbaado ah.
Talooyin Gurigu Caafimaad Ka Heli Karo
Labada dhinac ee qoraalkan midkood waxa ku dhigan xog ku saabsan sida loo garan karo badeecooyinka guriga ee amaanka ah, sida looga takhalusi karo badeecooyinka guriga ee khatarta ah, iyo talooyin ku saabsan sida aad u dhimi karto sunta xayawaanka qoyskaaga soo gaadhi karta. Dhinaca kalena waxa ku dhigan qoraal kaa hagaya habab amaan dheeraad ah leh oo ku saabsan lix shaqo oo wax nadiifin ah, iyo talooyin ku saabsan hab amaan badan oo guryaha lagu ranjiyayn karo.
Dhiqle/Dukhaan? Ha Buufin!
Qoraalkan ogeysiis ah waxa uu dadweynaha u sheegayaa cidda lagala xidhiidho caawinaad halkii laga buufin lahaa.
Qoyskayga amaan dheeraad ah ayaa ugu jira nadiifinta cagaaran
Ka ilaali qoyskaaga kiimikada sunta ah adigoo adeegsanaya afkaartan fudud. Iska ilaali badeecooyinka ay ku dhigan tahay KHATAR ama SUN. Waxa kale oo ku dhigan habka aad u samaysan karto dareerayaasha lagu nadiifiyo dhulka, shooladaha, tuubooyinka biyo-saarista iyo musqulaha.
Halista: Meerkuriga ku jirto Kareemada Maqaarka Ifiya
HA isticmaalin kareemyada aad ku aragtid warqadaan. Waxay leeyihiin halis heer sareyso oo meerkuriga ah.
Beereynta Cuntada ee Galbeedka Washington
Hagahan wuxuu kugu caawinayaa in aad abuurato cunto caafimaad ah oo adiga iyo qoyskaaga. Baro sida loo: xulo goobta ugu wanaagsan ee beerida, Diyaari ciida iyo qorsheynta bacriminta; Dooro wakhtiga ugu wanaagsan ee wax la beerayo; beero wati dheer, dalag weyn, Wareega sannadka beerashada; Kaydi iyo la wadaag dalagaada, waxaa ka mid ah qoraalka Ingiriiska.
Shan Tallaabo oo Daryeelka Daarada dabiiciga ah
Baro shan wado ee lagu daryeelo daaradaada oo qaab ammaan u ah adiga iyo qoyskaaga iyo deegaanka. Waxaa kujira sida loo dhiso dhul caafimaad ah, sida loogu waraabiyo si wax ku ool ah iyo sida looga fogaado isticmaalka cayayaanka.
Curiyaha macdanta Waxay Sumeyn Kartaa Canugaaga
Teresa Lohr, Washington (State). Department of Health
Kaarkaan wuxuu soo koobayaa saameynada saameynada cafimaadka ee sunta curiyaha hagaha baaritaanka dhiiga.
Qoyskaaga ka Badbaadi Macdanta Ledhka ee Gurigaaga
U.S. Environmental Protection Agency and other federal agencies
Talaabooyin fudud oo ku tusaya sida qoysaska looga badbaadiyo macdanta ledhka ee guryaha. Talooyinka waxa loogu talogalay qoysaska, mulkiileyaasha guryaha, iibsadeyaasha, kireysteyaasha, jadiidiyeyaasha iyo iibiyeyaasha